Wasaaradda Qorsheynta oo daah furtay Mashruuca Xasilinta Dalka
Kulan maanta magaaladda muqdisho ay ku yeesheen mas’uuliyiin ka kala socotay Wasaaradda Qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah ee Dowladda Soomaaliya iyo Safaaradda Dowladda Norwey ee Soomaaliya ayaa waxaa lagu daah-furay Mashruuca Xasilinta Dalka oo ka mid ah mashaariicda wasaaradda qorsheynta Soomaaliya ay ugu tala gashay horumarinta dalka.
Danjire ku xigeenka safaaradda Dowladda Norwey ee Soomaaliya Vebjorn Heines ayaa sheegay in waxa ugu muhiimsan ee mashruucan loo fulinayo uu yahay in shaqa abuur loo sameeyo dhalinyada Soomaaliyeed maadaaama ay yihiin qeybta ugu badan Bulshada.
‘’Ujeedka Mashruucan aan ka leenahay waxa uu yahay inaan ka qeyb qaadano Dib u heshiisinta ,nabada ,Xasiloonida iyo horumarka Dalka Soomaaliya, sidoo kale waxa aan rabnaa in uu abuuro shaqooyin badan oo ay helaan dhalinyarada” ayuu yiri Vebjorn Heines
Wuxuu intaasi raaciyay “Soomaaliya waa dal dadkiisu ay dhalinyaro u badanyihiin waxay u baahanyihiin shaqooyin ,waxaan sido kale aan jecelnahay in qeyb ka ahaano horumar iyo xasilooni waarta oo ay Soomaaliya gaarto, Soomaaliya waa dal leh qorax iyo dabeyl sidaas daraadeed awooda qoraxda iyo awooda dabeylaha waa u muhiim mustaqbalka ugu dambeyn Soomaaliya waa dal ay ku noolyihiin bulsho wanagsan oo jecel horumarka iyo ganacsiga’’.
Wasiirka wasdaarada qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya C/raxmaan Yuusuf Cali Ceynte ayaa sheegay in mashruucaan uu ka mid yahay mashaariicda ugu waa weyn ee dalka laga hir geliyay.
Sidoo kale Wasiir Ceynte ayaa tilmamay in mashruucaan uu waafaq sanyahay qorshaha qaranka ee sedaxda sano soo socoto isagoo ugu mahad celiyay dowlada norwey sida ay ugula shqeysay mashrucuaan fulintiisa.
Wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya ayaa wadda qorshaha dalka lagu horumarinayo iyadoo la kaashaneysa dowlada caalamka ee Soomaaliya taageera waxaana dowlada Norwey ay ka mid tahay dowlada sida weyn u taageera Soomaaliya.